250 km saacadii ayuu xawaaraha waddooyinka xadiidka noqonayaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lena Erixon, agaasimaha guud ee wakaaladda gaadiidka. sawir: Henrik Montgomery/TT
250 km saacadii ayuu xawaaraha waddooyinka xadiidka noqonayaa
La daabacay torsdag 31 augusti 2017 kl 15.31
Wakaallada gaadiidka waxa ay sheegtay in ay maalgelinayaan wadooyinka xadiidka, balse waxa ay hoos u dhigeen xawaaraha wadooyinkan. Wadooyinkan oo la sugayey in ay noqdaan 320 km saacadii ayaa hada noqonaya 250.
Wadooyinkan ayaa la sheegay in ay ka kharash yaraan doonaan intii hore. Haseyeshee 18 mirir oo dheeraad ah ayuu qaadanayaa socdaalka mastaafada u dhaxaysa Stockholm iyo Göteborg, halka mastaafada u dhaxaysa Stockholm iyo Malmö ay qaadanayso 20 mirir oo dheeraad ah, marka loo barbardhigo xawaaraha 320 km sacaddii.
-Dowladdu waxay noo soo jeedisay in mashruucan loo hirgeliyo marba qeeybta la awoodo oo ay shaqooyinka kale ee dawladda miisaaniyadda la qeeybsato. Sidaas daraadeed ayaan soo jeedinay in xawaaraha laga dhigo 250 km sacaddii. Waayo mudo dheer ayey qaadanaysaa in la dhisto xawaare intan ka dheer hadii marba qeeyb la dhisaayo. Waxa kale oo aan ogaanay in aanay wakhti ahaan wax badan u dhaxaynin labadan xawaare balse kharash ahaan ay wax badan u dhaxeeyaan, sida ay sheegtay gudoomiyaha guud ee wakaaladda gaadiidka.
Wakaaladda gaadiidka waxa kale oo ay soo bandhigtay sida loo kala horeysiinayo dhismaha wadooyinkan, waxaanay sheegeen in waddada isku xidhaysa Järna iyo Linköping lagu bilaabi doono dhismaha, waxaa ku xigi doona waddada isku xidhi doonta Hässleholm iyo Lund. Ujeeddada marba qeeyb loo dhisayo ayaa ah in la sii adeegsan karo marba qeeybta la dhamaystiro waddada.